Jeneraal Saacid oo loo heyso falal amni darro ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Jeneraal Saacid oo loo heyso falal amni darro ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal C/xakiin Daahir Saciid ayaa si kulul u beeniyay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmaraayay, kaas oo ku saabsan in xilka laga qaadayo, isagoo sheegay inuu xilka sii heyn doonno.
Arrintaan ayaa timid kadib markii taliye Saacid laga qoray fadeexad maaliyadeed oo kusoo baxday iyo cadaadis saarnaa tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay ee Ramadaan, waxaana soo baxaya xog kale oo ku saabsan xaaladaha ku wareegsan taliyaha booliska Soomaaliyeed.
Warbaahinta Bulshoweyn oo arrintaasi dabagal dheeraad ah ku sameeysay ayaa ogaatay in taliye Saacid lagu soo eedeeyay wax qabasho la’aan iyo inuu ogolaaday falal amni darro ah oo looga sii digay, waxayna arrintaan soo baxday kadib markii uu taliyaha booliska ka baaqsaday inuu tallaabo u qaado ka hortagga falal amni darro oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Aggaasimaha hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA C/laahi Sanbaloolshe ayaa la sheegayaa in madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo guddiga amniga la wadaagtay xog ku saabsan wada-shaqeyn la’aan ka heysata ciidamada booliska, iyadoo taliye Saacid waxba ka qaban waayay dhowr xog oo lala wadaagay, si uu tallaabo u qaado xaalad amni darro oo lagu wargeliyay, kuwaasoo dhibaato ka geystay Muqdisho, iyadoo ciidamada booliska aanay wax tallaabo ah qaadin.
Sidoo kale, aggaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu diidan yahay xil ka qaadista taliyaha ciidamada booliska Jeneraal Saacid, isagoo hore uga dambeeyay in xilkaan loo magacaabo, waxaana la sheegay inuu Saacid abti u yahay Fahad.
Ugu dambeyn, dhawaan ayay ahayd markii taliyaha ciidamada booliska Jeneraal Saacid laga wareejiyay arrimaha maamulka lacagta ciidamada, kadib markii uu isku dayay in qaar ka mid ah mushaaraadka ciidamada uu dib u dhigo.